မြို့လည်ခေါင်မှာ. ထော်လာဂျီ .. ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်ဆော်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြို့လည်ခေါင်မှာ. ထော်လာဂျီ .. ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်ဆော်သည်
မြို့လည်ခေါင်မှာ. ထော်လာဂျီ .. ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်ဆော်သည်
Posted by fatty on Aug 16, 2011 in News | 16 comments
အားတော့နာပါရဲ့ ၀င်ဖတ်တဲ့သူတွေကို ………..
ဒီနေ့ မြို့လည်ခေါင် ရောက်တုန်း အဝေးနေသူတွေ ရန်ကုန်မြို့ကြီး
ဘယ်လောက်တိုးတက်နေပြီလဲ ဆိုတာသိစေချင်လို့ ….
အလွမ်းပြေလေးလဲ ကြည့်ရအောင်ဆိုပြိး ချိန်လိုက်တာ ……..
ရိုက်ကွင်းထဲဝင်လာတာက မြင်တဲ့အတိုင်းဘဲလေ …။
သီးခံပြီးဘာမှမဟုတ်တာလေးကို ကြည့်လက်စနဲ့ပြီးအောင်သာကြည့်ကြပါတော့လို့ ..။
သူတို့လဲ သတင်းယူတာဘဲဗျ ….။
မြင်ကွင်းပေါ့နော .. သတင်းပုံအနေနဲ့
Auto နဲ့ဘဲနှိပ်ထားတော့ ပုံကတော့
မတော် .. ကိုယ်ကလဲ ကင်မရာချိန်နေ ..
မစီးရတာကြာပြီလေ ..။ ကျနော်တို့မှာ
အော်မှန်လေးတွေ ကွဲပြီး..တစ်စစီ အမှုန့် ဖြစ်သွားလို့ .အစတောင် ရှာမရတော့ဘူး..
ပြန်ပြင်ရင် မနဲ ကုန်တော့မယ်..ရောင်းရင်လဲ တိုက်ကားမိုလို့ ဈေးနှိမ်ခံရဦးမယ်..
စတီးတန်းကြီး တောင် လိမ်သွားတာ..အရှိန်တော့ မသေးလောက်ဘူး
thank u fatty!
ဒီလောက်ကားရှုပ်တဲ့ဆူးလေမှာ ထော်လာဂျီက ဘယ်လိုသွားမှာလဲမသိ
ဒီမိုကရေစီသာဆိုတယ် မြို့ထဲမှာ ကင်မရာတောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် မကိုင်ရဲရပါလားနော်…
တခြားထော်လာဂျီတွေတော့ မြို့ထဲ ၀င်လို့မရလောက်ဘူးထင်တယ်
စည်ပင် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်မယ်
ဘာမှ မဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ မတော်တဆမှု တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆို တိုက်လိုက်လဲမကောင်း ခံရလဲမကောင်း
ငွေကုန် အလုပ်ရှုပ်နဲ့ တော်တော် စိတ်ညစ်ဘို့ကောင်းတာ
အော်…. မြို့ထဲသွားရင်း တွေ့မိပါတယ်..
စည်ပင်က ထော်လာဂျီ သဲအိတ် ဘိလပ်မြေအိတ် တွေတင်ပြီး
ဘယ်နေရာပြင်ဘို့လဲလို့တလွဲ တွေးမိ သွားတယ်..
လမ်းပြင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ ပီပီနဲ့တော့ တွေ့နေပြီ… ဘယ်လောက်တောင်းနေလဲမသိ….
ကြုံလို့ ပြောရဦးမယ်။ မြစ်ကြီးနားက ကားလမ်းပုံ ပိုစ့်တက်တုန်းက ငါတို့ဆီက ကားလမ်းကိုလည်း ရိုက်ပြီး တင်လိုက်ဦးမယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကင်မရာကိုင်ပြီး လူကြားထဲမှာ လိုက်မရိုက်ရဲတာနဲ့ပဲ မတင်နိုင်တာ။ ဘုရင့်နောင်တံတားက အသေးစားယာဉ်တိုက်မှုဆိုပြီး လျှပ်တပျက်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ပိုစ့်တင်တဲ့ etone ကို ချီးကျူးမိတယ်။
” ကင်မရာကိုင်ပြီး လူကြားထဲမှာ လိုက်မရိုက်ရဲတာနဲ့ပဲ ”
Don’t worry much, nothing will happen, be brave !!!
အောင်မလေး ကိုနိုင်ငံခြားသားကြီးရယ် .. ထင်လို့ပါ …။
အခုနောက်ပိုင်း ကင်မရာကိုင်လျှင် မပြောနဲ့ … အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန် ဖုန်းပြောနေလျှင်တောင် ခေါ် အစစ်ဆေးခံရတယ်(ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မှာစိုးလို့… ) .. ကိုယ်တွေ့ရှင့် …. ကိုယ်တွေ့ … ။ ပြန်စဉ်းစားမိလျှင် ဒေါသထွက်တယ် တယ်တုံးတဲ့ ငါပါလားလို့လေ …
ထော်လာဂျီ ဆိုလို့ အမှတ်ရပါသေး၇ဲ့…။ အခါတစ်ပါးက မြစ်ကြီားဖက်က တပ်ရင်းမှူးတစ်ယောက်ဆဲတာ…။ အဟုတ်… ထော်လာဂျီအသံကြားတိုင်းဆဲတာ…။ ” ရိုးမ ဟာတွေ…။ ပလပ်စတစ်နဲ့ နှိပ်စက်ရုံနဲ့ အားမရလို့ အသံနဲ့ပါထပ်နှိပ်စက်နေတယ်” တဲ့…။ စဉ်းစားသာကြည့်တော့..။
ဘဲဥ နဲ့ဈေးညှိနေပုံလည်း ပါတယ်တော့..:P
ဘယ်နှယ်.. ရန်ကုန်မြို့လည်ကြီး..နေ့ခင်းကြောင်တောင်… ထော်လာင်္ဂျီက.. လမ်းလယ်အကာဝင်တိုက်တာကိုး..။
ဟာ ဘဲဥတော့ ဒီနေ့ ဗိုက်ခွေးနမ်းပီ. ဟိ ဟိ။တောင်းလို့ ရသမျှ အရက်ဆိုင်ဘဲရောက်မလား၊ကာရာအိုကေဘဲရောက်မလား။ပုံကိုက ဝမ်းသာမဆုံးတပြုံးပြုံးနဲ့ ။ဒိန်းဒေါင်းသမားကမျာမတော့ ဟင့် ဟင့်
ဦးဖက်တီးရဲ့ ရိုက်ချက်တွေကတော့ ကောင်းပါ့ဗျား …. နောက်လည်း မြင်ချင်ပါသေးတယ် … အားပေးလျက်ပါ ခင်ဗျာ …..
တောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး ဗျ
ထော်လာဂျီခေါင်း စတီးတိုင်ကြားညှပ်နေလို့ 
ဟားဟား သတင်းထောက်အရမ်းတော်တယ်ဗျာ ပေစိတော့သိပ်သိပ်ကြိုက်